China 2D pin ibheji ifektri nabakhiqizi | Kingtai
Lawa mabheji ethusi anesitembu agcwaliswa ngo-Imitation Enamell,Lawa maphinikhodi e-lapel angokwezifiso anombala ogqamile futhi anekhwalithi enhle, anemininingwane yensimbi ephakanyisiwe futhi ehoxisiwe.,akudingeki ukumbozwa kwe-epoxy, . Lokhu kucubungula kobuciko kuzobe kuphakamisile umugqa wensimbi , onokuthungwa kwensimbi eqinile kakhulu.
Iphinikhodi ye-2D lapel iguquguquka kakhulu futhi ingasetshenziswa ngezikhathi ezahlukahlukene! Zisebenzisele isipho, isikhumbuzo somklomelo, ukuphromotha kanye Nezinhle kumaphromoshini wekhwalithi ephezulu webhizinisi, amakilabhu nezinhlangano, lawa mabheji aveza ubuciko bekhwalithi ephezulu. konke phakathi.
Izikhonkwane ze-Lapel ze-2D isinyathelo sokuqala ukusuka kumaphini we-die hit
Isikhunta se-die die sigaywa kusukela kumdwebo wakho ogunyaziwe,
futhi isikhunta se-die sisetshenziselwa ukugxiviza umsebenzi wakho wobuciko eshidini lensimbi noma lensimbi yethusi
Ngokushesha ngemva kwalokho, isitayela somklamo wakho siyasikwa ukuze sibe nohlaka olunembile, isinyathelo sokuqala siphelile.
Isinyathelo esilandelayo sipholishwa ngesandla, lezi zindawo zensimbi eziphakanyisiwe zicwebezeliswa kuze kube sekugcineni kwesibuko, bese isinyathelo esilandelayo inqubo yokucwenga, ukuze ucwecwe ungakhetha imibala eminingi ehlukene.
I-Nickel yegolide (isiliva) yethusi, ne-nickel emnyama (isiliva elimnyama/i-chrome emnyama) ,Ngenkathi indawo ehlehlisiwe igcwaliswa ngopende woqweqwe lwawo.i-oda elincane kungaba umsebenzi wezandla, ukuhleleka kwe-hug kungase kube umshini wokugcwalisa umbala ozenzakalelayo.
Sisebenzisa imibala ye-Pantone ingaxutshwa ngokuqondile nge-oda ngalinye, singaqinisekisa izindinganiso zomkhiqizo wakho ncamashi okusinika inombolo ye-Pantone.
Idizayini yakho yangokwezifiso ingafaka imibala efika kweyisithupha futhi ingagxivizwa kunoma yimuphi umumo ngezinketho zegolide, isiliva, ithusi noma i-nickel emnyama. Inani elincane le-oda ama-pcs ayi-100.
Sinikezela ngezinsizakalo zaMAHHALA zobuciko nokuklama ngawo wonke ama-oda! Ithuluzi lethu lokuklama le-DIY kanye nensizakalo yokufanisa imibala ye-Pantone izoqinisekisa ukuthi izikhonkwane zakho ziyilokho kanye okucabangayo. Bonke ubufakazi bubuyekezwa kuze kube yilapho usuneliseke ngokuphelele.
Okwedlule: Uhlamvu lwemali
Olandelayo: Iphinikhodi ye-lapel ye-Digital Phrinta